Archive du 20170619
Ambatondrazaka Raikitra ny halatra taova ?
Matahotra mafy ny mponina any Ambatondrazaka sy ny manodidina amin’izao fotoana taorian’ny zava-nitranga ny alakamisy lasa teo. Ankizy mirahalahy 16 taona sy dimy taona no nanamparan’ireo jiolahy ny hadalany.
Fanjakana Malagasy Miantehitra ara-bola amin’ny tsy miankina
Hampiantrano ny fikaonandohan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina momba ny kalitao avo lentan’ny fotodrafitrasa iarahana amin’ny governemanta japoney i Madagasikara ny 24 jolay 2017.
Antoko HVM Diso mahatoky tena loatra
Natao tany Toliara ny 16-17 jona teo ny fihaonambem-paritry ny ny antoko HVM, izay nireharehan’ny mpitondra fatratra fa tena matanjaka izy ireo.
Firaisankina ho fanavotana an’i Madagasikara Miketrika fidinana an-dalambe
Manizingizina ny fikambanana « Ny firaisankina ho fahombiazan’ny Tolona » izay nihaona tamin’ny mpanao gazety teny Ambodirano Ivato ny sabotsy lasa teo fa hetsi-bahoaka lehibe ihany sisa no vahaolana hampahafantarana amin’ny mpitondra sy izao tontolo izao ny ngidin’ny fahasahiranana mianjady amin’ny Malagasy.
Taratasy ho an’i Jean Mba mailo amin’izay
Mino aho izao ry Jean fa mba efa naharay lesona tamin’ny zava-nisy hatramin’izay isika an !
Filaharambe eny amin’ny banky Efa tena fampijaliana vahoaka
Velon-taraina ny mpanjifa eny amin’ny ankamaroan’ireo banky eto Antananarivo amin’izao fotoana noho ny filaharana lavareny.
Trafikana sokatra Nirongatra be nanomboka ny taona 2015
Nanatontosa fifanakalozan-kevitra narahina asam-bondrona teny amin’ny «Le Pavé» Antaninarenina ny alakamisy teo ny UMRFJ (Union de Magistrats pour la Revalorisation de la Fonction de Juger).
Kaominina Ivato Mpiadina CEPE miisa 360 nomena fampitaovana
Mpianatra miisa 360 hiatrika fanadinana CEPE no notoloran’ny fikambanana DESTINY fitaovana hiatrehana fanadinana rahampitso talata 20 jona.
Andraisoro Raim-pianakaviana iray hita faty tao an-tokantranony
Raim-pianakaviana iray manodidina ny 67 taona no fantatra fa hita faty tao an-tokantranony tao Andraisoro Fonenana ny sabotsy teo. Ny talata no hitan’ny mpiara-monina taminy farany izy.
Filohan’ny FLM Lasa nitsabo tena any Frantsa
Lasa nitsabo tena any Frantsa ny sabotsy teo ny filohan’ny Fiangonana Loterana Malagasy, Rév David Rakotonirina.
Andro iraisam-pirenena momba ny Yoga 700 mahery ireo mpandray anjara
Nanamarika ny andiany faha-3 ny andro iraisam-pirenenan’ny Yoga, teny amin’ny Boulodrome eny Soavimbahoaka Antananarivo ny alahady 18 jona 2017 ny masoivohon’i Inde eto Madagascar.
Ariana dia indray aloha !
Ankatoky ny fety tokoa ary dia vao tany amin’ny fiandohan’izao volana jona izao no efa sesilany ny fanambaran’ny
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Mila fanohanana ny fokontany
Mirongatra sy mahazo vahana hatrany ny tsy fandriampahalemana amin’izao fotoana izao eto an-drenivohitra sy ny manodidina.